RFA Burmese, 2025 M St NW, Washington, DC (2020)
http://www.rfa.org/burmese/ Ph: +951-565517, +951-564759 (+1) 202-530-4900, Email: [email protected]
Mission: Radio Free Asia’s mission is to provide accurate and timely news and information to Asian countries whose governments prohibit access toafree press. Guided by the core principles of freedom of expression and opinion, RFA serves its listeners by providing information critical for informed decision-making.
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို ဖယ်ရှားရေး ကြိုးပမ်းချက်ကို ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်များ ကာကွယ်ပြောကြား
■ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်က ရုပ်သိမ်းရေး ကြိုးပမ်းချက် မအောင်မြင်ပေမယ့်လည်း ဒါဟာ အနာဂတ် လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရတို့ သင်ခန်းစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ကာယကံရှင်က ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရဲ့ နေပြည်တော် ပါတီရုံးချုပ်မှာ ဒီကနေ့ ဇွန် ၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော် သက်တမ်း နှစ်ကြိမ်အတွင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးကို ရာထူးတာဝန်ကနေ ရုပ်သိမ်းဖို့ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ လွှတ်တော် မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပြီး နောက်နောင်မှာ လွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အစိုးရတွေ သင်ခန်းစာယူနိုင်မယ်လို့လည်း မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် အမတ် ဦးစိုင်းထွန်းစိန်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲမှု ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ပြုလုပ်တဲ့ ရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်သူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းအေးကလည်း ဒီ အဆိုတင်မှုဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မူတွေ မပါဝင်ဘဲ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အကျိုးကို ကြည့်ပြီး ပြည်သူလူထုကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အာဏာရ NLD ပါတီက ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက တင်တဲ့ အဆိုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စွပ်စွဲချက်တွေ ပါဝင်ပြီး အချက်အလက်တွေ မှန်ကန်မှုမရှိသလို မဲခွဲရင် အောင်မြင်နိုင်ခြေမရှိတာကို သိပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်တာလို့ RFA သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို ရာထူးက ရုပ်သိမ်းဖို့အဆိုကို စက်ခလုတ်နှိပ်ပြီး လျှို့ဝှက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာမှာ ထောက်ခံသူ ၁၃၂ ဦး၊ ကန့်ကွက်သူ ၂၄၃ ဦး ၊ ကြားနေ ၅ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ထောက်ခံမဲ သုံးပုံ နှစ်ပုံ မရှိတဲ့အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ မရှိကြောင်း လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၄၃၀ ဦးရှိတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ NLD ပါတီက ၂၅၀ ဦး၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ၂၉ ဦးနဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၀ ဦး ရှိပါတယ်။
အဆိုအောင်မြင်ဖို့ ထောက်ခံသူ ၂၈၇ ဦးရှိရမှာဖြစ်လို့ ဒီပမာဏ မရနိုင်ဘူး ဆိုတာကို လေ့လာသူတွေကလည်း ကြိုတင်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မင်းကင်း အမတ် ဦးမောင်မြင့်က လွှတ်တော် လူမြင်ကွင်းမှာ စက်ခလုပ်နှိပ်မဲခွဲတာ မဟုတ်ဘဲ စာရွက်နဲ့ လျှို့ဝှက်မဲပေးရင် အဆိုကို ထောက်ခံသူ ပိုရနိုင်တယ်ရှိကြောင်း၊ အရှုံး အနိုင်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား အတွက် အဆိုတွေ ထပ်တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဦးမောင်မြင့်က လွှတ်တော်ထဲကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ များများ ပိုရောက်စေချင်ပြီး အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြန်အသက်သွင်းတာတွေ၊ ထပ်မံရေးဆွဲတာ တွေ လုပ်မယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဦးတီခွန်မြတ်ကို ရာထူးကနေ ရုပ်သိမ်းဖို့ စွပ်စွဲခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဥပဒေနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေကြမ်းတွေ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် သီးခြား ဆွေးနွေးခွင့် မရတဲ့ကိစ္စ၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ၄၅ ဦး ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ ခွင့်ပေးတဲ့ ကိစ္စ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကောင်စီမှာ ညှိုနှိုင်းဖို့အဆိုကို လွှတ်တော်က ခွင့်မပြုတဲ့ကိစ္စ၊ အိုင်စီဂျေက ကြားဖြတ် အမိန့်ချမှတ်တဲ့အပေါ် အစိုးရဆောင်ရွက်ချက်တွေ ပြည်သူကို ရှင်းလင်းဖို့ အဆိုကို လွှတ်တော်က ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ အပါအဝင် ဒဿမတန်းသင်ရိုး၊ ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ ဘာသာရပ်မှာ လိင်စိတ်ကို နှိုးကြွစေတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်တဲ့အဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ခွင့်မပြုတဲ့ကိစ္စ စတဲ့ အချက်ပေါင်း ၁၁ ချက် ပါဝင်ပါတယ်။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ဖယ္ရွားေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္မ်ား ကာကြယ္ေျပာၾကား
■ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို တာဝန္က ႐ုပ္သိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ေပမယ့္လည္း ဒါဟာ အနာဂတ္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရတို႔ သင္ခန္းစာျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ကာယကံရွင္က ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ဒီကေန႔ ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ဦးကို ရာထူးတာဝန္ကေန ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေနာင္မွာ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ အစိုးရေတြ သင္ခန္းစာယူႏိုင္မယ္လို႔လည္း မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။
ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲမႈ ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္တဲ့ ရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးကလည္း ဒီ အဆိုတင္မႈဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မူေတြ မပါဝင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အက်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
အာဏာရ NLD ပါတီက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန႔္ကေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက တင္တဲ့ အဆိုမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ပါဝင္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္မႈမရွိသလို မဲခြဲရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခမရွိတာကို သိေပမယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္တာလို႔ RFA သတင္းဌာနကို ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ရာထူးက ႐ုပ္သိမ္းဖို႔အဆိုကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၁၃၂ ဦး၊ ကန႔္ကြက္သူ ၂၄၃ ဦး ၊ ၾကားေန ၅ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ မရွိတဲ့အတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔ မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၃၀ ဦးရွိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ NLD ပါတီက ၂၅၀ ဦး၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၉ ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး ရွိပါတယ္။
အဆိုေအာင္ျမင္ဖို႔ ေထာက္ခံသူ ၂၈၇ ဦးရွိရမွာျဖစ္လို႔ ဒီပမာဏ မရႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို ေလ့လာသူေတြကလည္း ႀကိဳတင္သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
မင္းကင္း အမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ လူျမင္ကြင္းမွာ စက္ခလုပ္ႏွိပ္မဲခြဲတာ မဟုတ္ဘဲ စာ႐ြက္နဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးရင္ အဆိုကို ေထာက္ခံသူ ပိုရႏိုင္တယ္ရွိေၾကာင္း၊ အရႈံး အႏိုင္ကို ထည့္မတြက္ဘဲ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ အဆိုေတြ ထပ္တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာပဲ ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ထဲကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားမ်ား ပိုေရာက္ေစခ်င္ၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပန္အသက္သြင္းတာေတြ၊ ထပ္မံေရးဆြဲတာ ေတြ လုပ္မယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ရာထူးကေန ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ စြပ္စြဲခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေတြ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ သီးျခား ေဆြးေႏြးခြင့္ မရတဲ့ကိစၥ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ ခြင့္ေပးတဲ့ ကိစၥ၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီမွာ ညႇိဳႏႈိင္းဖို႔အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳတဲ့ကိစၥ၊ အိုင္စီေဂ်က ၾကားျဖတ္ အမိန႔္ခ်မွတ္တဲ့အေပၚ အစိုးရေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ျပည္သူကို ရွင္းလင္းဖို႔ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ အပါအဝင္ ဒႆမတန္းသင္႐ိုး၊ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မွာ လိင္စိတ္ကို ႏႈိးႂကြေစတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ကန႔္ကြက္တဲ့အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳတဲ့ကိစၥ စတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၁၁ ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။
(ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှာ ၂၀၂၀ ဇွန် ၁ ရက်နေ့ က သတင်းစာရှင်းလင်း ကျင်းပစဉ်)
(၂ဝ၂ဝ ဇွန် ၁၊ ည ၈ နာရီ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၂၈ ဦးမှာ ၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ ၁၃၈ ဦးရှိပါတယ်။
(၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် -
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၉) ခုနှင့်
အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၄၆၀)ခု၊
စုစုပေါင်း (၅၁၉)ခု အား ယနေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ -
၂။ (၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၂၂၈) ဦးရှိပါသည်။
၃။ (၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း (၁၃၈) ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ အနက် (၁၂၈) ဦးအား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက်ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
၅။ (၃၁-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၁-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၂၉) ဦး ရှိပါသည်။
#MoHS, #COVID19LabResults, #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, #ဓာတ်ခွဲအဖြေ
■ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဒီလထဲမှာ အပြီးသတ် ရွေးချယ်ပြီး အမည်စာရင်းပို့ဖို့ NLD က အောက်ခြေကို ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုထဲမှာ စီးပွားရေး အချက်အခြာကျပြီး လူနေထူထပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သြဇာကြီးမားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ကို လူထုထောက်ခံမှု များပြားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထပ်မံပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိ အနိုင်ရခဲ့ရင် အသင့်တော်ဆုံးသူတွေကို ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့တွေကို ဦးဆောင်စေသင့်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူတွေကို စမတ်ကတ် ထုတ်ပေးပြီး ဖြေရှင်းမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် အကောင်အထည်မပေါ်သေးသလို ကမ်းနားလမ်း ကွန်တိန်နာတင်ကား ဖြတ်သန်းမှုကိစ္စလည်း အဆင်မပြေသေးပါဘူး။
ရန်ကုန်ကိုစီမံခန့်ခွဲမယ့်သူဟာ နောက်နှစ်များစွာအထိ အမြော်အမြင်ရှိပြီး ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်နိုင်သူဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ပြောတာက Mandalay Technology ကုမ္ပဏီရဲ့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဇော်နိုင်ပါ။
“ရန်ကုန်ကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူဟာ အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့သူ၊ ရှေ့ကိုအမြင်ရှိတဲ့သူ၊ ရန်ကုန်ကို နောက်ဆယ်နှစ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး မြင်ချင်သလဲ၊ နောက်အနှစ်ငါးဆယ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ဘယ်လိုမျိုး မြင်ချင်သလဲဆိုတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့သူမျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်၊ ပထမဆုံး တစ်ခုက။ ဒုတိယတစ်ခုက အဲဒီအမြော်အမြင်ရှိပြီး အဲဒါကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည် ပြည့်ဝတဲ့၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ နောက်ပြီးတော့ အခုခေတ်ကာလက အလွန့်အလွန် ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းလဲနေတာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းနိုင်တဲ့ တက်ကြွတဲ့ မြို့တော်ဝန်၊ ဝန်ကြီးချုပ် အဲဒီလို ခေါင်းဆောင်မျိုး လိုချင်ပါတယ်”
လက်ရှိတိုင်းအစိုးရရဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဆီမှာ ရန်ကုန်ကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိလားဆိုတာ ရန်ကုန်က ပြည်သူအနေနဲ့ သိချင်ပေမယ့် မသိရတဲ့အတွက် အစိုးရရဲ့ ငါးနှစ်တာကာလ အလကား အချိန်ကုန်သွားပြီလို့ ဒေါက်တာဇော်နိုင်က ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့က အဓိကကျတယ်ပေါ့၊ ဒီလိုနေရာမျိုး ဦးဆောင်မယ့်သူဟာ စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့သူမျိုး၊ အထူးသဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ ပြဿနာတွေ အများကြီးဖြစ်နေတာ၊ ပြဿနာဆိုတာက ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ရှိလာခဲ့တဲ့ စနစ်အမှားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေများကြီးကို စုပုံနေတဲ့နေရာ ဖြစ်နေတယ်၊ စုပုံနေတော့ နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အားလုံးပေါ့ အဲ့ဒါတွေအားလုံးက ပြဿနာတွေ အများကြီးနဲ့ အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာ၊ ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို အထူးသဖြင့် ဦးဆောင်ဖို့ ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့၊ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့၊ စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့၊ ဘယ်ပြဿနာကိုဘယ်လို အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ မှန်မှန်နဲ့ အဖြေရှာနိုင်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူကို ကျွန်တော်တို့က ဖြစ်စေချင်တယ်”
ရန်ကုန်က ပရဟိတသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းကျော်ဟန်ကတော့ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အားသာချက်တွေထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့ ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီစဉ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့ မထသ အဖွဲ့နေရာမှာ YBS နဲ့ အစားထိုး ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မထသဆိုတဲ့အဖွဲ့မျိုးကိုဖျက်ပြီးတော့ YBS ဆိုတဲ့ ကားအသစ်တွေ ပေါ်လာတယ်၊ တကယ့်ကို သေသေချာချာ အစလုပ်ခဲ့တာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက ပြောရမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ကလည်း ကျယ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့မြို့လေးတွေ နယ်လေးတွေမှာ လမ်းလေးတွေ ကောင်းလာတာ အဲလိုမျိုး ပြောင်းလဲတာတွေတော့ ရှိပါတယ်၊ အရမ်းကြီး အားရကျေနပ်မှုတွေ မရှိဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာလည်း သူနေရာနဲ့ သူ့အထာနဲ့တော့ ရှိတော့ရှိမယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်ပါတယ်”
“ဘက်စုံတိုင်းမှာတော့ တိုးတက်မှုတွေတော့ရှိတယ်၊ လမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တာလည်း တော်တော်တိုးတက်မှုရှိတယ်၊ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကတော့ အထိုက်အသင့် အလျောက်ကို အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်၊ ခြုံပြီးတော့ ပြောရရင်တော့ အားရကျေနပ်မှုရှိတာ ကျောင်းကားနဲ့ YBS ပဲ၊ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်တဲ့ တချို့အရာတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့လေ၊ သူလုပ်သင့်တဲ့ သူလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သူလုပ်တယ်၊ သူလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလောက် သူလုပ်တယ်၊ တချို့ အရာတွေမှာ သူ တစွတ်ထိုး လုပ်လိုက်မိတာတွေတော့ ရှိတယ်ပေါ့လေ”
ကျန်းမာရေးဌာနက ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွေ အပါအဝင် လူစုလူဝေး မလုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ကြားက ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက ဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာ အခမ်းအနားတချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ လူအများအပြား ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ကို ကပ်ဘေးကာလ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက် ပါတီက နှုတ်နဲ့သတိပေးထားတယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကပ်ဘေးကာလ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ တခြားဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုလည်း သတိပေးထားတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
■ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဒီလထဲမွာ အၿပီးသတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အမည္စာရင္းပို႔ဖို႔ NLD က ေအာက္ေျခကို ၫႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့ပါတီရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈထဲမွာ စီးပြားေရး အခ်က္အျခာက်ၿပီး လူေနထူထပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD ကို လူထုေထာက္ခံမႈ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ထပ္မံၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့အထိ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးသူေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ဦးေဆာင္ေစသင့္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္သူေတြကို စမတ္ကတ္ ထုတ္ေပးၿပီး ေျဖရွင္းမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္မေပၚေသးသလို ကမ္းနားလမ္း ကြန္တိန္နာတင္ကား ျဖတ္သန္းမႈကိစၥလည္း အဆင္မေျပေသးပါဘူး။
ရန္ကုန္ကိုစီမံခန႔္ခြဲမယ့္သူဟာ ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာအထိ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ႏိုင္သူျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာက Mandalay Technology ကုမၸဏီရဲ႕ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာေဇာ္ႏိုင္ပါ။
“ရန္ကုန္ကို စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူဟာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့သူ၊ ေရွ႕ကိုအျမင္ရွိတဲ့သူ၊ ရန္ကုန္ကို ေနာက္ဆယ္ႏွစ္မွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ျမင္ခ်င္သလဲ၊ ေနာက္အႏွစ္ငါးဆယ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျမင္ခ်င္သလဲဆိုတဲ့ အျမင္ရွိတဲ့သူမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ပထမဆုံး တစ္ခုက။ ဒုတိယတစ္ခုက အဲဒီအေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး အဲဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္ ျပည့္ဝတဲ့၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုေခတ္ကာလက အလြန႔္အလြန္ ေျပာင္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လိုက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ တက္ႂကြတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဲဒီလို ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး လိုခ်င္ပါတယ္”
လက္ရွိတိုင္းအစိုးရရဲ႕ စီမံခန႔္ခြဲသူေတြဆီမွာ ရန္ကုန္ကို ဘယ္လို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိလားဆိုတာ ရန္ကုန္က ျပည္သူအေနနဲ႔ သိခ်င္ေပမယ့္ မသိရတဲ့အတြက္ အစိုးရရဲ႕ ငါးႏွစ္တာကာလ အလကား အခ်ိန္ကုန္သြားၿပီလို႔ ေဒါက္တာေဇာ္ႏိုင္က ဆိုပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အဓိကက်တယ္ေပါ့၊ ဒီလိုေနရာမ်ိဳး ဦးေဆာင္မယ့္သူဟာ စြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့သူမ်ိဳး၊ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲဆိုေတာ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာ၊ ျပႆနာဆိုတာက ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ရွိလာခဲ့တဲ့ စနစ္အမွားေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြမ်ားႀကီးကို စုပုံေနတဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနတယ္၊ စုပုံေနေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အားလုံးေပါ့ အဲ့ဒါေတြအားလုံးက ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနတာ၊ ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အထူးသျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖို႔ ဆိုတဲ့အခါမွာ ဒါေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့၊ ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့၊ စြမ္းရည္ေကာင္းတဲ့၊ ဘယ္ျပႆနာကိုဘယ္လို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ မွန္မွန္နဲ႔ အေျဖရွာႏိုင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္ေစခ်င္တယ္”
ရန္ကုန္က ပရဟိတသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုထြန္းေက်ာ္ဟန္ကေတာ့ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီစဥ္မႈအားနည္းခဲ့တဲ့ မထသ အဖြဲ႕ေနရာမွာ YBS နဲ႔ အစားထိုး ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တာလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“မထသဆိုတဲ့အဖြဲ႕မ်ိဳးကိုဖ်က္ၿပီးေတာ့ YBS ဆိုတဲ့ ကားအသစ္ေတြ ေပၚလာတယ္၊ တကယ့္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ အစလုပ္ခဲ့တာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကလည္း က်ယ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ရမွာေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေလးေတြ နယ္ေလးေတြမွာ လမ္းေလးေတြ ေကာင္းလာတာ အဲလိုမ်ိဳး ေျပာင္းလဲတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္၊ အရမ္းႀကီး အားရေက်နပ္မႈေတြ မရွိဘူးေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔မွာလည္း သူေနရာနဲ႔ သူ႔အထာနဲ႔ေတာ့ ရွိေတာ့ရွိမယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္ပါတယ္”
“ဘက္စုံတိုင္းမွာေတာ့ တိုးတက္မႈေတြေတာ့ရွိတယ္၊ လမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာလည္း ေတာ္ေတာ္တိုးတက္မႈရွိတယ္၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာကေတာ့ အထိုက္အသင့္ အေလ်ာက္ကို အားရေက်နပ္မႈရွိတယ္၊ ၿခဳံၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ အားရေက်နပ္မႈရွိတာ ေက်ာင္းကားနဲ႔ YBS ပဲ၊ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္တဲ့ တခ်ိဳ႕အရာေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့ေလ၊ သူလုပ္သင့္တဲ့ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို သူလုပ္တယ္၊ သူလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသေလာက္ သူလုပ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ အရာေတြမွာ သူ တစြတ္ထိုး လုပ္လိုက္မိတာေတြေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့ေလ”
က်န္းမာေရးဌာနက ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေတြနဲ႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနားေတြ အပါအဝင္ လူစုလူေဝး မလုပ္ဖို႔ အမိန႔္ထုတ္ထားတဲ့ၾကားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔အဖြဲ႕ဟာ မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားမွာ အခမ္းအနားတခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ လူအမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဝဖန္ခံေနရပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကပ္ေဘးကာလ အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပါတီက ႏႈတ္နဲ႔သတိေပးထားတယ္လို႔ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကပ္ေဘးကာလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ တျခားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း သတိေပးထားတယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကို ဦးစီးမယ့်သူက ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်သင့်သလဲ ~~~~~~~~~~ သန့်ဇင်ဦး ■ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဒီလထဲမှာ အပြီးသတ် ရွေးချယ်ပြီး အမည်စာရင်းပို့ဖို့ NLD က အောက်ခြေကို ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုထဲမှာ စီးပွားရေး အချက်အခြာကျပြီး လူနေထူထပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီဟာ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်နေရာအတွက် ပိုမိုဂရုစိုက် ရွေးချယ်ဖို့ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်သူတချို့က ပြောကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အမတ်လောင်းတွေကို ဒီလထဲမှာ အပြီးသတ် ရွေးချယ်ပြီး ဗဟိုကို တင်ပြရတော့မှာပါ။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ ဒီနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပြီဖြစ်လို့ အဆင်သင့်ပြင်နေတာဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်မြို့နယ်ကို ငါးဦးနှုန်း အဆိုပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က သတင်းထောက်တွေကို မေ ၃၁ ရက်နေ့ မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ဝင်ပြိုင်မယ့် NLD က လွှတ်တော်အရပ်ရပ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ထောင်ကျော် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တဲအတွက် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့တွေ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို စိတ်ကြိုက် ခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သြဇာကြီးမားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ကို လူထုထောက်ခံမှု များပြားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထပ်မံပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိ အနိုင်ရခဲ့ရင် အသင့်တော်ဆုံးသူတွေကို ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့တွေကို ဦးဆောင်စေသင့်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ ပြည်နယ်၊ တိုင်း ၁၄ ခု အစိုးရတွေထဲမှာ အဝေဖန်အခံရဆုံးကတော့ လူဦးရေ ၈ သန်းဝန်းကျင် နေထိုင်တဲ့ဒေသကို စီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူတွေကို စမတ်ကတ် ထုတ်ပေးပြီး ဖြေရှင်းမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် အကောင်အထည်မပေါ်သေးသလို ကမ်းနားလမ်း ကွန်တိန်နာတင်ကား ဖြတ်သန်းမှုကိစ္စလည်း အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့က သတင်းစာဆရာ ဦးဇေယျာလှိုင်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် အပြောနဲ့အလုပ် ညီတဲ့သူတွေ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပ
အိန္ဒိယကပြန်လာတဲ့ တပ်မတော်သားလေးယောက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရ
အိန္ဒိယကပြန်လာတဲ့ တပ်မတော်သားလေးယောက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရ ~~~ ■ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သင်တန်းတက်ပြီး မေလ ၂၄ ရက်က မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ တပ်မတော်သား ၁၈ ယောက်ထဲက လေးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ၂၂၈ ယောက် ရှိသွားပါပြီ။ ကမ္ဘာတဝန်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှုအခြေအနေ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို RFA ဝိုင်းတော်သူ မခက်မာ တင်ပြထားပါတယ်။ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -Zawgyi အိႏၵိယကျပန္လာတဲ့ တပ္မေတာ္သားေလးေယာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရ ~~~ ■ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ သင္တန္းတက္ၿပီး ေမလ ၂၄ ရက္က ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္သား ၁၈ ေယာက္ထဲက ေလးေယာက္မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူ ၂၂၈ ေယာက္ ရွိသြားပါၿပီ။ ကမာၻတဝန္းက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈအေျခအေန ေနာက္ဆုံးရသတင္းေတြကို RFA ဝိုင္းေတာ္သူ မခက္မာ တင္ျပထားပါတယ္။ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် (၂ဝ၂ဝ ဇွန် ၁ ညပိုင်း)
ဦးတီခွန်မြတ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးက ဖယ်ရှားရေးအဆို လွှတ်တော်မှာ ရှုံးနိမ့် ~~~~~ ■ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးတီခွန်မြတ်ကို ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားရေး ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လွတ် တော်ကို တင်ထားတဲ့ အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ စက်ခလုတ်နှိပ်ပြီး လျို့ဝှက် ဆန္ဒမဲခွဲရာမှာ ကန့်ကွက်မဲများတဲ့အတွက် အဆို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ မဲမခွဲခင်မှာ အဆိုအပေါ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ ဦးက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဒုတိယဥက္ကဌက အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့ရတာမျိုးထိ အကြိတ်အနှယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် မသက်စုအောင် က တင်ပြပေးပါမယ် ။ (စုစည်းတင်ဆက် - သက်စုအောင် ၊သီဟထွန်း ) (unicode) ~~~~~~~~ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးက ဖယ္ရွားေရးအဆို လႊတ္ေတာ္မွာ ရွံုးနိမ့္ ~~~~~ ■ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားေရး ၾကံ႔ခိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီက လြတ္ ေတာ္ကို တင္ထားတဲ့ အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ျပီး လ်ိဳ႕၀ွက္ ဆႏၵမဲခြဲရာမွာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားတဲ့အတြက္ အဆို ရွံုးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ မဲမခြဲခင္မွာ အဆိုအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ဒုတိယဥကၠဌက အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိေပးခဲ့ရတာမ်ိဳးထိ အၾကိတ္အနွယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကို RFA သတင္းေထာက္ မသက္စုေအာင္ က တင္ျပေပးပါမယ္ ။ (စုစည္းတင္ဆက္ - သက္စုေအာင္ ၊သီဟထြန္း ) (zawgyi)
ကပ်ဘေးကာလမှာ တုပ်ကွေးကိုလည်း သတိထားဖို့ ပညာရှင်တွေ သတိပေး
ကပ်ဘေးကာလမှာ တုပ်ကွေးကိုလည်း သတိထားဖို့ ပညာရှင်တွေ သတိပေး ~~~~~~~~~~ ဇာဏီထွဏ်း ■ ကပ်ရောဂါသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အပြင် မိုးဦးကာလမှာ နှစ်တိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 တွေလည်း ဖြစ်တတ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာလည်း ဆင်တူတာကြောင့် ဂရုစိုက်ကြဖို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ကပ်ရောဂါသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ် ရှိနေတဲ့အပြင် မိုးဦးကာလမှာ နှစ်တိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 တွေလည်း ဖြစ်တတ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာလည်း ဆင်တူတာကြောင့် ဂရုစိုက်ကြဖို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတည်ပြုလူနာအများအပြားရှိနေတဲ့အချိန်မှာ မိုးရာသီရောက်တိုင်း ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ သွေးလွန် တုပ်ကွေး၊ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဆင်တူတာကြောင့် ခွဲခြားရခက်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ တင်သစ္စာလွင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလက္ခဏာတွေမှာ ဖျားတာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ အသက်ရှုရခက်တာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ အနံ့အရသာပျောက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ ဆင်တူပေမဲ့ အနံ့အရသာ ခံစားနိုင်မှု လျော့နည်းပျောက်ဆုံးတာတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ H1N1 ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က လူပေါင်း ၉၀ ကျော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၉ မှာတော့ အယောက် ၃၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားပြီး ၆၉ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံး တာများတဲ့အသက်အရွယ်တွေက ငါးနှစ်အောက် ကလေးတွေနဲ့ ၆၅ နှစ်အထက် လူကြီးတွေပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း မရသေးပါဘူး။ အဖြစ်အများဆုံးက ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတွေပါ။ နောက်ထပ် သတိထားရမယ့်ရောဂါကတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပါ။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ ဒီနှစ် မေလအတွင်း ဆေးရုံတက်ကုသရသူ ၁၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ကိုးယောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ ဖြစ်ပွားသူ ၂၅၀ လောက်ရှိနေပြီး လေးဦး သေဆုံးတာကြောင့် ဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာနေပါပြီ။ အခုချိန်မှာ ဖျားလာပြီဆိုရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်လားဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပြီး နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံးသွားသင့်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်သူ့ကျန
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ၂၁ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေ ~~~~~~~~~~ နေမျိုးထွန်း ■ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်နိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး အစိုးရက ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာမှာဖြစ်လို့ စတုတ္ထကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင်လုံကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ အစိုးရကရော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါ ပြောနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၃၀ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အလားတူ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာမှာ ကျင်းပဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ဖော်ပြော ကြားထားတာကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ ကာလမရောက်ခင် ဇူလိုင်လအတွင်း ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပဖို့ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို အဆိုပြုထားတယ်လို့ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ “ညီလာခံက ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ တပ်မတော်ဘက်မှာလည်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်မှာဖြစ်သလို အစိုးရဘက်မှလည်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အနေအထားတွေရှိတယ်။ ငါးနှစ်လုံးလုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက နောက်လက်ထက်မှာ ဘယ်ပုံစံဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့ မရေရာ မသေချာမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံး သဘောတူ လက်ခံထားတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ညှိနှိုင်းသွားဖို့လိုတယ်” ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ၂၁ ရာစု ပင်လုံကျင်းပပြီး NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ အဆင့်လိုက် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူ စတဲ့ ပြည်ထောင်စုသဘောတူ စာချုပ် အစိတ်အပိုင်း(၃) ကို ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ၂၁ ပင်လုံ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ခေါ်ယူကျင်းပဖို့ လိုအပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မလွဲမသွေ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက် ကတိကဝတ်မျိုး လိုအပ်သလို ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူနဲ့ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက RFA ကို ပြောပါတယ်။ “ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ဖက်ဒရယ်နဲ့ တည်ဆ
RFA စကားဝိုင်း ၅ မိနစ်အကျဉ်း ~~~~~~~~~~ ■ " ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ပြည်တော်ပြန်မြန်မာတွေရဲ့ အခက်အခဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ " ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးသန့်ဇင်အောင် (ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်) - ဦးမိုးကြိုး (မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ) - ဦးလှမြင့် (ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆွန်ခါမြို့မှာ နေထိုင်သူ) (လွှင့်ရက် - ၂၀၂၀ မေ ၃၀ ရက်၊ စနေနေ့) - Unicode ~~~~~~~~~~~~~~~ RFA စကားဝိုင္း ၅ မိနစ္အက်ဥ္း ~~~~~~~~~~ ■ " ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျပည္ေတာ္ျပန္ျမန္မာေတြရဲ႕ အခက္အခဲ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ " ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား - ဦးသန႔္ဇင္ေအာင္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္) - ဦးမိုးႀကိဳး (ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ) - ဦးလွျမင့္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဆြန္ခါၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္သူ) (လႊင့္ရက္ - ၂၀၂၀ ေမ ၃၀ ရက္၊ စေနေန႔) - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~~~
AA စခန်းတွေကို တပ်မတော်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာ
AA စခန်းတွေကို တပ်မတော်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာ ~~~~~ ■ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မေယုမြစ်ထဲမှာ စနေနေ့ညက ခုတ်မောင်းသွားတဲ့ တပ်မတော်ရေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြစ်ကမ်းဘေးက ရွာတချို့ကို ပစ်ခတ်လို့ အရပ်သား ငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကတော့ သူတို့ကို AA အဖွဲ့ကတိုက်လို့ ပြန်တိုက်တာလို့ မနေ့က မေလ ၃၁ ရက်ညမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ပလက်ဝမြို့အနောက်ဘက်က AA ခြေကုတ် စခန်း သုံးခုကို တပ်မတော်က သိမ်းလိုက်တယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုရဲစည်သူကာ တင်ပြထားပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~~~ AA စခန္းေတြကို တပ္မေတာ္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ေၾကညာ ~~~~~ ■ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမယုျမစ္ထဲမွာ စေနေန႔ညက ခုတ္ေမာင္းသြားတဲ့ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္ေပၚကေန ျမစ္ကမ္းေဘးက ႐ြာတခ်ိဳ႕ကို ပစ္ခတ္လို႔ အရပ္သား ငါးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြားတယ္လို႔ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေတာ့ သူတို႔ကို AA အဖြဲ႕ကတိုက္လို႔ ျပန္တိုက္တာလို႔ မေန႔က ေမလ ၃၁ ရက္ညမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္က AA ေျခကုတ္ စခန္း သုံးခုကို တပ္မေတာ္က သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုရဲစည္သူကာ တင္ျပထားပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~~~
တောင်ကိုရီးယားမှာ ကိုရိုနာထိန်းနိုင်ဖို့ လူတွေကိုကွန်ပျူတာဘားကုတ်နဲ့မှတ်ထား
တောင်ကိုရီးယားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းနိုင်ဖို့ လူတွေကိုကွန်ပျူတာဘားကုတ်နဲ့မှတ်ထား ~~~~~ (ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်) ■ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ နည်းပညာသုံးပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နှုန်းထိန်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဗာတီကန်က ဝတ်ပြုပွဲအပြင် အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အခြေအနေတွေကို ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က တင်ပြထားပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ဝတ်ပြုပွဲကြီးတွေကို ခန်းမထဲမှာမဟုတ်ဘဲ အပြင်ဘက်မှာ ကျင်းပပြီး ကျန်းမာတဲ့လူကိုပဲ တက်ခွင့်ပေးဖို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ညွှန်ကြားချက်သစ် ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ CNN သတင်းမှာ မနေ့က ဖော်ပြပါတယ်။ အီတလီမှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်တဲ့ သုံးလနီးပါးအတွင်း ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ Vatican City က St. Peter ရင်ပြင်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က အရင်ကလုပ်နေတဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း ပြတင်းဝကနေ မနေ့က ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။ ရင်ပြင်မှာ ကမ္ဘာလှည့်တွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်မနေဘဲ အီတလီနိုင်ငံသားတွေပဲ နှာခေါင်းစည်းတွေ စည်းထားကြပြီး ခပ်ခွာခွာနေရပ်ရက်က ဝတ်ပြုပွဲ တက်ရောက်ပါတယ်။ ဂျေရုစလင်က အထွတ်အမြတ်အထားဆုံး ဝတ်ကျောင်းတော် တစ်ကျောင်းလည်း နှစ်လကျော်ကြာ ပိတ်ထားပြီးမှ မနေ့က ပြန်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ချမှတ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို အစ္စရေးရော ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင်တွေပါ စတင်လျှော့ချပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကူးစက်လူနာသစ်ဦးရေ ရုတ်တရက်များလာတဲ့အတွက် ဆက်တက်နေမယ်ဆိုရင် ထပ်မံတင်းကျပ်ရမယ့် အလားအလာရှိတယ်လို့ အစ္စရေး ခေါင်းဆောင်တွေက သတိပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြီးရင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဒုတိယမြောက် အများဆုံး ကူးစက်ခံထားရပြီး လက်တင်အမေရိကမှာ ဘရာဇီးလ်ပြီးရင် ပီရူးနိုင်ငံမှာ အများဆုံး ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်မှာ လူ ၅ သိန်းကျော်ကူးစက်ခံထားရပြီး ၂ သောင်းကျော် သေဆုံးရပါတယ်။ ပီရူးမှာလူ တစ်သိန်းခွဲကျော် ကူးစက်ခံထားရပြီး ၄ ထောင်ကျော်သေဆုံးပါတယ်။ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ စနေမနက်က တနင်္ဂနွေမနက်ထိ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ လူ ၈၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူချည်း တစ်သိန်း ၉ သောင်းကျော်ပြီး လူ ငါးထောင်ကျော် သေဆုံးရပါတယ်။ မတ်လ ၂၅ ရက်ကတည်းကစပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အသွားအလာကန့်သတ်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်ပမှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယတွေနဲ့ ရ
ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေက ပြောတဲ့ မြန်မာပြည်
ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေက ပြောတဲ့ မြန်မာပြည် ~~~~~ (မောင်သစ်ဆင်း) ■ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ - " မြန်မာ - သင့်ကို စောင့်ကြည့်နေတယ် " ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့၊ East Asia Forum သတင်းစာမှာပါတဲ့ တရုတ်ရဲ့လောင်းရိပ်ထဲက မြန်မာ ရုန်းထွက်နိုင်မလား ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကို တင်ပြထားပါတယ်။ မေလ ၂၈ ရက် ဘန်ကောက်ပို့ သတင်းစာမှာ - " မြန်မာ - သင့်ကို စောင့်ကြည့်နေတယ် " ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖော်ပြပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်က IIMM ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းရေးယန္တရားအဖွဲ့ ရဲ့ ဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုလပိုင်းတွေအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိစ္စက အာရှတိုက်နဲ့တကွ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ IIMM အဖွဲ့ အနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို မျက်ကွယ်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စယန်ဟီးလီ က - တစ်ကမ္ဘာလုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူစက်နေချိန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရပ်ဘက်လူထုတွေ အပေါ် ပစ်မှတ်ထားပြီး အရှိန်မြှင့် တိုက်ခိုက်နေတုန်းပဲလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကစလို့ ရခိုင်နဲ့ ချင်းမှာ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် အရပ်ဘက်ပြည်သူ ရာနဲ့ချီ သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ တစ်သိန်းခွဲကျော် နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရကြောင်း၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ကလည်း ဒေသဆိုင်ရာ အရာရှိတွေနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ စုံစမ်း အရေးယူရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရာထူး သက်တမ်း မကုန်ခင် ပြောခဲ့တာပါ။ မိမိတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကစလို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ မှုခင်းအထောက်အထားတွေကို စုဆောင်းပြီး၊ ကျူးလွန်သူတွေကို ပြစ်မှုအလိုက် ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတွေအထိ တင်ပြစစ်ဆေး အရေးယူနိုင်တဲ့အထိ ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်က ၂၀၁၉ သြဂုတ်လကုန်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်၊ မြန်မာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးယန္တရားအဖွဲ့ နဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ရှေ့မှာ စိန်ခေါ်ချက်တွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းရှိနေပေမယ့်၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြ
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် (၂ဝ၂ဝ ဇွန် ၁ မနက်ပိုင်း)
မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံးရေကန် အင်းတော်ကြီးအိုင်မှာ ရေနည်းပါးလာ ~~~~~~~~~~ ■ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်က အာဆီယံ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် UNESCO အသိအမှတ်ပြု အင်းတော်ကြီးအိုင်မှာ ရေလျော့နည်းလာပြီး ဒါဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အစိုးရကတော့ ရေအိုင်ကြီးဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရေးမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မအဲလိဇဘက်ဂျန်မာက တင်ပြထားပါတယ်။ အစိုးရကတော့ ရေအိုင်ကြီးဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရေးမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တတိယအကြီးဆုံး ကုန်းတွင်းရေတိမ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က အင်းတော်ကြီးကန် ရေလျော့နည်းလာနေကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေသတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု၊ ရွှေတရားမဝင် တူးဖော်မှုတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်၊ မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေးက ပြောပါတယ်။ သစ်တော၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြပ်မတ်ပေးဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ ဦးတင်အေးက ပြောပါတယ်။ တန်ဖိုးးထားရမယ့် အင်းတော်ကြီးအိုင်ကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းဖို့ အစိုးရက စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသောင်းညွှန့်က ပြောပါတယ်။ ပြည်နယ် သံယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးဒါရှီလဆိုင်းက အစိုးရအနေနဲ့လည်း တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုတွေကို ပိတ်ပင်တားမြစ်နေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းတဲ့အတွက် တားမြစ်ဖို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံနေရတယ်လို့လည်း ဝန်ကြီး ဦးဒါရှီလဆိုင်းက ပြောပါတယ်။ အင်းတော်ကြီးအိုင် ရေခန်းခြောက်မှုဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်လောက်က စတင်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ ရေခန်းခြောက်မှု အဆိုးဆုံးကြုံတွေ့ရတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အလျား ၁၄ မိုင် အနံ ခုနှစ်မိုင်ခန့်ရှိတဲ့ အင်းတော်ကြီးကန်ဟာ အာဆီယံ အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဒေသဖြစ်တဲ့အပြင် အင်းတော်ကြီးဘေးမဲ့တောကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေးသိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ရဲ့ ဇီဝအဝန်းနယ်မြေအဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်းတော်ကြီးကန်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာလကနေ မတ်လအတွင်း ဆောင်းခိုငှက် ကောင်ရေ ၂၀၀၀၀ ကျော်
RFA နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် (၂ဝ၂ဝ မေ ၃၁ ညပိုင်း)
တပ်ကပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရသေ့တောင် ဒေသခံ ငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ~~~~~~~~~~ ■ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မေယုမြစ်အတွင်း မနေ့ညက ခုတ်မောင်းသွားတဲ့ တပ်မတော်ရေယာဉ်ကနေ ကမ်းဘေးက ကျေးရွာတချို့ကို ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ အရပ်သား ငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မေလ ၃၀ ရက် စနေနေ့ညက သောင်းဒရားရွာအနီး မေယုမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ခုတ်မောင်းသွားတဲ့ တပ်မတော်ရေယာဉ်ကနေ မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းက ရွာတချို့ကို လှမ်းပစ်ခဲ့တာလို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများအစည်းအရုံး REC က ပြောပါတယ်။ ရွာ ငါးရွာက နေအိမ်တချို့ပျက်စီးပြီး၊ ၉ တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး အပါအဝင် အရပ်သား ငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ REC အတွင်းရေးမှူး ကိုဇော်ဇော်ထွန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ “သောင်းဒရားကျေးရွာကနေ အဲဒီမေယုမြစ်အတိုင်းဖြတ်ပြီး ပစ်ခတ်သွားတာ ကျေးရွာ ငါးရွာလောက် ထိသွားတယ် မြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းကိုပဲ ရွေးပစ်သွားတာ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ခြားနေရာက ဒေသခံတွေ မရှိတော့ဘူး၊ အကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ မီးရှို့ခံရတဲ့ ရွာတွေလည်းပါတယ်။ အဲရွာတွေမှာ လူတွေရှိနေတယ်၊ တပ်မတော်က ဒီရွာတွေမှာ အေအေဖက်ကလူတွေ ခိုလှုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့များ တိုက်ခိုက်သွားလား ဒါလဲ ယူဆချက်ပါ” ကံပြင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၊ စဖိုကျွန်း၊ အောင်ဇေကုန်းကျေးရွာတွေက တစ်ဦးစီနဲ့ ဒိုးဝေချောင်း ကျေးရွာက နှစ်ဦး ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူ ငါးဦးထဲက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းက တစ်ဦးကတော့ ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ဘဲ ကျန်တဲ့ ဒေသခံ လေးဦးကတော့ စေတီပြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ စေတီပြင်ကျေးရွာ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့က ကိုအောင်မင်းစိုးက ပြောပါတယ်။ “လေးယောက် စေတီပြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံကို တင်ထားတယ်၊ ကံပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက တစ်ယောက်က သိပ်ဒဏ်ရာမများလို့ စေတီပြင်ကို မလာတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်” အဲဒီကျေးရွာတွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲ တပ်မတော်က မြစ်ကြောင်းတလျှောက် သွားလာရင်း ပစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲ ဒေသခံတွေ ပစ်ခတ်ခံရတာ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ဆိုပါတယ်။ “တိုက်ပွဲဖြစ်တာ မဟုတ်ဘဲ ညမိုးချုပ်မှပစ်တာဖြစ်တယ်၊ တိုက်ပွဲမရှိဘဲပစ်တာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အနိုင်ရအောင်တိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကြားကနေ ပြည်သူတွေခံရတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်” ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် သတ
" ဟဟ ပါပဲ "
" ဟဟ ပါပဲ " ~~~~~~~~~~ ■ ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မောင်သံဒိုးရဲ့ " ဟဟ ပါပဲ " အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ " ဥပဒေအထက်မှာ မည်သူမျှ မရှိစေရ " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~ " ဟဟ ပါပဲ " ~~~~~~~~~~ ■ ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္သံဒိုးရဲ႕ " ဟဟ ပါပဲ " အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ် မရွိေစရ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~
မေလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်တစ်နာရီအချိန် ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအခြေအနေ
မေလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်တစ်နာရီအချိန် ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအခြေအနေ ~~~~~~~~~~ တင်အောင်ခိုင် ■ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မေလ ၃၀ ရက် ည ၈ နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ အသစ်မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း ၂၂၄ ဦးရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကပြန်လာသူ ၁၇ ဦးထံက ရောဂါပိုးတွေ့တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် စနေနေ့က ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ အသစ် ခုနှစ်ထောင်ကိုးရာကျော်နဲ့ တနေ့တည်းရောဂါပိုးတွေ့သူ အများဆုံးနေ့အဖြစ် စံချိန်တင်သွားပါတယ်။ လက်ရှိအခြေမှာ နိုင်ငံတွင်းနှစ်လကြာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားတာတွေကို ပြန်လျော့ပေးနေချိန်မှာ ရောဂါပိုးတွေ့သူ ပြန်များလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်တချို့မှာဆိုရင် နယ်ကျော်ပြီးလာသူတွေကို ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနေပြီး အစစ်ခံရသူတွေထံက စစ်ဆေးခ အိန္ဒိယငွေ ရူပီး ၆၀၀ ကိုပါ တောင်းယူနေပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ကပ်လျက် ပါကိစ္စတန်မှာလည်း စနေနေ့က ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၈ ဦးဖြစ်လို့ သေဆုံးသူ စံချိန်တင်သွားပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူး စက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ တစ်ထောင့်သုံးရာကျော်ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အာရှမှာ ရောဂါအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ စင်္ကာပူမှာတော့ မေလအတွင်း နေ့စဉ်ကူးစက်ခံရသူ ကျဆင်းလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက နေ့စဉ် လူ ၇၀၀ လောက် ရောဂါအကူးခံနေရတာကနေ စနေနေ့က လူ ၅၀၀ ကျော်ပဲ ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်း စနေနေ့က လူ ၅၀၀ ကျော်ရောဂါကူး စက်ခံရပြီး ရောဂါဖြစ်နေသူ စုစုပေါင်း နှစ်သောင်းခွဲရှိပါတယ်။ စနေနေ့က သေဆုံးသူ ၅၃ ဦးရှိပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ တတိယ ရောဂါအဖြစ်များတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလည်း စနေနေနေ့က ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၀၀ ကျော်ပါတယ်။ သေဆုံးသူကတော့ ရှစ်ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်ပါတယ်။ ကိုဗစ်19ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ရောဂါကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြေရှိနေပြီလို့ ပြောနေပေမယ့် စနေနေ့က ရောဂါပိုးရှိသူ လေးဦးတွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလေးဦးဟာ ပြည်တွင်းက မဟုတ်ဘဲ ပြည်ပကပြန်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွ
ရန်ကုန်မြို့မှာ တစ်လအတွင်း တိုက်နှစ်ခါပြို ~~~~~~~~~~ ■ ရန်ကုန်တိုင်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာ မနေ့က မေလ ၃၀ ရက်နေ့ညက လေးထပ်တိုက်တစ်လုံး ပြိုကျခဲ့ပြီး မေလ ၂၁ ရက်နေ့က တာမွေမြို့နယ်မှာ ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုရဲစည်သူကာ တင်ပြထားပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တစ္လအတြင္း တိုက္ႏွစ္ခါၿပိဳ ~~~~~~~~~~ ■ ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ မေန႔က ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ညက ေလးထပ္တိုက္တစ္လံုး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပိဳက်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုရဲစည္သူကာ တင္ျပထားပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~
ရခိုင်ပြည်နယ်က လတ်တလောဖြစ်ရပ်တွေအတွက် သမ္မတရုံး သဘောထား ~~~~~~~~~~ ■ မေလ ၃၀ ရက်နေ့က သမ္မတရုံးရဲ့ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကျ အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ (၁) ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ စက်ရုံစုရပ်ကွက်မှာ ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကို ဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကိစ္စနဲ့ အဲဒီအမိန့်ကြော်ငြာလိုက်ကပ်တဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ၊ (၂) လက္ကာရွာမီးရှို့ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ (၃) AA ရက္ခိုင့်တပ်တော်က အစိုးရလက်အောက်ခံ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ခွာခိုင်းတဲ့အပေါ် အစိုးရရဲ့သဘောထားတွေကို သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးကို RFA သတင်းထောက် မသက်စုအောင် မေးမြန်းထားတာ ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~ ရခိုင္ျပည္နယ္က လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ သမၼတ႐ုံး သေဘာထား ~~~~~~~~~~ ■ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က သမၼတ႐ုံးရဲ႕ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက် အြန္လိုင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ (၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ စက္႐ုံစုရပ္ကြက္မွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူေတြကို ဖယ္ရွားခိုင္းတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိစၥနဲ႔ အဲဒီအမိန႔္ေၾကာ္ျငာလိုက္ကပ္တဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥ၊ (၂) လကၠာ႐ြာမီးရႈိ႕ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ (၃) AA ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က အစိုးရလက္ေအာက္ခံ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္က ထြက္ခြာခိုင္းတဲ့အေပၚ အစိုးရရဲ႕သေဘာထားေတြကို သမၼတ႐ုံး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးကို RFA သတင္းေထာက္ မသက္စုေအာင္ ေမးျမန္းထားတာ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~
အစိုးရနဲ့ AA တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အလားအလာ အားရစရာမရှိ ~~~~~ သီဟထွန်း၊ သက်စုအောင် ■ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအတွက် အစိုးရ တပ်မတော်က AA အဖွဲ့ကို စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပေမယ့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကိုလည်း ဖွင့်ထားပြီး၊ AA အပါအဝင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့တွေဘက်က တုံ့ပြန်မှုကတော့ အားရစရာ မရှိဘူးလို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက သတင်းထောက်တွေကို ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ AA ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကတော့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က မျှော်လင့်စရာ ဘာမှမရှိတော့ တာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ထွက်ခွာသွားကြဖို့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားဖို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပေါ် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားကို RFA က မေးမြန်းရာမှာ လက်နက်ကိုင် နည်းလမ်းနဲ့ ရည်မှန်းချက် မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဘက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကို ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီး AA အပါအဝင် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်က တုံ့ပြန်မှုကတော့ အားရစရာ မရှိဘူးလို့ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ "ကျတော်တို့ကတော့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေညာထားတယ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ သောင်းကျန်းသူ နှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင်ရေး အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင်ရေး ဒါတွေကိုတော့ တပ်မတော်က ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ် သို့သော်လည်းပဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းကိုတော့ ပိတ်မထားဘူး သူနဲ့အတူ ပါရှိနေတဲ့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်း ကျတော်တို့ မကြာသေးခင်ကပဲ ထပ်ပြီးမေးတယ် ကြားထဲက peace creation group ကနေ တဆင့် ထပ်မေးတယ် ။ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို လိုလိုလားလားရှိရဲ့လား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုရော ဆန္ဒရှိရဲ့လား မေးပါတယ် မေးတော့ လတ်တလောမှာတော့ တုံ့ပြန်မှုက အားရစရာအခြေအနေမရှိပါဘူး " မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့နဲ့ နှစ်ဖက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုရေး ဆွေးနွေဖို့ မကြာသေးခင်ကပဲ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်က ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် တုံ့ပြန်မှုက အားရစရာ မရှိဘူးလို့ ပြောသွားတာပါ။ မေလ ၂၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ AA အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေဟာ တပ်မတော် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို
WHO ကနေ အမေရိကန်နှုတ်ထွက်မည် ~~~~~ ■ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေ အမေရိကန်နှုတ်ထွက်မယ်လို့မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။WHO အဖွဲ့ဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားလာမယ့်အရေးကို စောစောစီးစီးကအသိမပေးဘဲ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ဖုံးဖိထားပေးခဲ့တယ်လို့ သမ္မတထရမ့်က စွပ်စွဲထားတာပါ။ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာတဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကို RFA ဝိုင်းတော်သားစောဖိုးခွားတင်ပြထားပါတယ်။ (unicode) ~~~~~~~~ WHO ကေန အေမရိကန္ႏႈတ္ထြက္မည္ ~~~~~ ■ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကေန အေမရိကန္ႏႈတ္ထြက္မယ္လို႔မေန႔ကေျပာလိုက္ပါတယ္။WHO အဖြဲ႕ဟာ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ျပန႔္ပြားလာမယ့္အေရးကို ေစာေစာစီးစီးကအသိမေပးဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဖုံးဖိထားေပးခဲ့တယ္လို႔ သမၼတထရမ့္က စြပ္စြဲထားတာပါ။ ျမန္မာနဲ႔ ကမၻာတဝန္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေတြကို RFA ဝိုင္းေတာ္သားေစာဖိုးခြားတင္ျပထားပါတယ္။ (zawgyi)
လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် မြေပုံဒုက္ခသည်စခန်း နေအိမ်များ ပျက်စီး ~~~~~ ■ ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ် ကိုင်းကြီးဒုက္ခသည်စခန်းကို လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ အဆောင်တွေ ပျက်စီးကုန်ပြီး စခန်းမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ အခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မဖြူဖြူခိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~~~ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမပုံဒုကၡသည္စခန္း ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီး ~~~~~ ■ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီးဒုကၡသည္စခန္းကို ေလျပင္းတိုက္ခတ္လို႔ အေဆာင္ေတြ ပ်က္စီးကုန္ၿပီး စခန္းမွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ အခက္အခဲေတြ႕ေနရပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ မျဖဴျဖဴခိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~~~
RFA စကားဝိုင်း အစီအစဉ်
RFA စကားဝိုင်း အစီအစဉ် ~~~~ ■ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA က အပတ်စဉ် စနေနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီအထိ “RFA စကားဝိုင်း” အစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ " ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ပြည်တော်ပြန်မြန်မာတွေရဲ့ အခက်အခဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ ဦးသန့်ဇင်အောင်(ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်)၊ ဦးမိုးကြိုး(မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)၊ ဦးလှမြင့်(ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆွန်ခါမြို့မှာနေထိုင်သူ)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ - Unicode ~~~~~~~~~~~~~~~ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ ~~~~ ■ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA က အပတ္စဥ္ စေနေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီကေန ၃ နာရီအထိ “RFA စကားဝိုင္း” အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာ " ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျပည္ေတာ္ျပန္ျမန္မာေတြရဲ႕ အခက္အခဲ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပင္တိုင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးသန႔္ဇင္ေအာင္(ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္)၊ ဦးမိုးႀကိဳး(ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ)၊ ဦးလွျမင့္(ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆြန္ခါၿမိဳ႕မွာေနထိုင္သူ)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ - Zawgyi ~~~~~~~~~~~~~~~
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (30-05-2020_စနေနေ့)
မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ် ~~~~~~ ■ ဒီတပတ် မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ်မှာ … KNU ကိုပေးရတဲ့ ဒဏ်ကြေးငွေက ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးထက်များနေလို့ လာမရွေးဖြစ်ကြဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့အတူ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချရင်း သုံးစွဲတတ်သွားတဲ့ မွန်အမျိုးသမီးတွေ များလာတဲ့အကြောင်း စတာတွေကို အစီအစဉ်မှူး မိကလျာနဲ့ ဗညားပိုင်တို့က တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ -Unicode ~~~~~ မြန္တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္ ~~~~~~ ■ ဒီတပတ္ မြန္တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္မွာ … KNU ကိုေပးရတဲ့ ဒဏ္ေၾကးေငြက ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးထက္မ်ားေနလို႔ လာမေရြးျဖစ္ၾကဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ရင္း သုံးစြဲတတ္သြားတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း စတာေတြကို အစီအစဥ္မွူး မိကလ်ာနဲ႔ ဗညားပိုင္တို႔က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ -Zawgyi
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာ ၇၀ပဲ ဆေးရုံမှာကျန်
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာ ၇၀ပဲ ဆေးရုံမှာကျန် ~~~~~~ (တင်အောင်ခိုင်) ■ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာသစ် တဦးရှိတယ်လို့ မေလ ၂၉ ရက် ည၈နာရီအချိန် ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပိုးတွေ့သူဟာ မလေးရှားနိုင်ငံက ပြန်လာသူ အသက်၄၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး အသွားအလာကန့်သတ်ခံထားရသူ ဧရာဝတီတိုင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်က ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း ၂၀၇ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ရောဂါတတိယအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သောကြာနေ့က ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ အသစ် ၁၀၀၀ကျော်နဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေ နိုင်ငံတွင်း စတင်ကူးစက်တဲ့ အချိန်ကစလို့ လူအများဆုံးကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် သောကြာနေ့က သေဆုံးသူလည်း ၂၁ဦး ရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း ၁၆ဝဝဝ ကျော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ တနိုင်ငံလုံး ကန့်သတ်တားဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်တာ ၂လကျော် ကြာနေတာကို လာမဲ့ တနင်္လာနေ့က စပြီး တဖြေးဖြေးခြင်း ဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ရောဂါ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၂၄နာရီ အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၆၀၀ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ၂၄ဦးရှိပေမဲ့ နိုင်ငံအဝှမ်း ရောဂါကူးစက်မှု တွေ စတင်ဖြစ်ပွားကထဲက ပိတ်ထားတဲ့ ပလီဝတ်ပြုကျောင်းတွေကို သောကြာနေ့က စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့ အညီပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေ အရ ဝတ်ပြုသူတဦးနဲ့ တဦး ၃ပေ အကွာ ခြားထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့ စင်္ကာပူဖြစ်နေပြီး လူ၃၃ဝဝဝ ကျော် ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေဆုံးသူကတော့ ၂၃ ဦး ပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နယ်ချင်းဆက်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို လျော့ပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ အညီပြန်ဖွင့်ပါတော့မယ် ရုပ်ရှင်ရုံတရုံမှာ လူ၂၀၀ထက် ပိုဝင်ခွင့် မပေးသလို ပရိသတ်ကို အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ အကွာအဝေးမှာ ခြားပြီးထိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက် အိန္ဒိယမှာတော့ ကြာသပတေးနေ့ကရောဂါကူးစက်သူ ၆ဝဝဝ ကျော်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ သောကြာနေ့က ၃ဝဝဝ ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း တသိန်း၆သောင်းကျော်ပါတယ်။ ကိုရ
မတူသောချစ်ခြင်း ~~~~~~ (ခက်မာ) ■ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သွားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ရောဂါကြီးအတွင်း ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လုပ်အားပေးတွေကို ရှေ့တန်းက တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအဖြစ် တကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အီတလီမှာဆိုရင် ဆရာဝန် ၁၆၃ ယောက်နဲ့ သူနာပြု ၄၀ လောက် ရောဂါကူးစက်သူတွေကို အပြင်းအထန် ကုသကယ်ဆယ်ရင်း သူတို့အသက်တွေ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလိုပဲ မြန်မာ လူမျိုး ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြု၊ ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်းနဲ့ လုပ်အားပေးတွေဟာလည်း ရှေ့တန်းက တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ "ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော်တို့လည်းကြောက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကူးစက်ခံရမှာ ကိုယ်ကတဆင့် ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေကို ကူးစက်မှာ ကြောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့စိတ်ထဲမှာကတော့ ကိုယ့်ဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်သားချင်း၊ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေလိုသဘောထားပြီး ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။" ဒါကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်သူတွေကို ထိတွေ့ကုသပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင် သီးခြားခွဲထုတ် စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရတဲ့ သင်္ကန်းကျွန်း ဖျားနာဆေးကုသခန်းက ဒေါက်တာကျော်စွာဦး ပြောပြခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ လဂူနာဟွန်ဒါ (Laguna Honda) ဆေးရုံနဲ့ နာတာရှည် နာလန်ထ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာက သူနာပြုဆရာမ မဒီဇင်မိုးက သူလည်း ကြောက်လန့် စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ "ဒါက ကပ်ရောဂါကြီးဆိုတော့ အများနည်းတူပဲ ကြောက်လန့်စိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဆိုတော့ တာဝန်ကျေချင်တဲ့စိတ်၊ တာဝန်သိစိတ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။" ကူးစက်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုမလုံလောက်တာ၊ ဆေးရုံနေရာနဲ့ ဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေ မလုံလောက်တာတွေကြောင့် လူနာတွေကို ရွေးထုတ်ကုသပေးခဲ့ရတာဟာလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် နာကျင်ဖိစီးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကျော်စွာဦး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကတော့ ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်ပါ စိုးရိမ်ရတဲ့အဖြစ်ပါ။ အခုဆိုရင် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကူးစက်မှု အရှိန်လျော့စပြုလာတဲ့အတွက် အသွားအလာကန့်သတ်တာတွေ ပြန်ဖြေလျှော့လာပါပြီ။ လူတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အပြင်ထွက်လာကြသလို နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲ ပူးပ
ဗိုင်းရပ်စ်ကာလ အပစ်ရပ်ဖို့ နိုင်ငံတကာတိုက်တွန်းမှု မြန်မာလက်နက်ကိုင်တွေ ဥပက္ခာပြု ~~~~~~ (ခင်မောင်စိုး) ■ မြန်မာပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှု တနေ့တခြား တိုးပွားလာနေ ပါတယ်။ အဲဒီစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မယ့် အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂွတ်တားရက်ဇ်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားကြပါလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းက မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သလို တခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေက ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲပါပဲ။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင် လက်နက်မဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကတော့ တပ်မတော်အနေနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို အစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောင်းကျန်းသူတွေကိုတော့ တိုက်ရမှာပဲလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း RFA ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဦးစိုင်းညွှန့်လွင် က ဒီနေ့မှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလို ကာလမှာ သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အားလုံး မိမိတို့ အရေးထက် ပြည်သူ့အရေးကို ဦးစားပေးပြီး စစ်ကိုရပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအကြား အပြန်အလှန် အပြစ်တင်နေကြချိန်မှာ အရပ်သားပြည်သူတွေကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ပဓာနမထားနိုင်ဘဲ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လတ်တလော သေကြေဒဏ်ရာရမယ့်အရေးက ထွက်ပြေးနေရဆဲပါပဲ။ အနှစ် ၇ဝ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေ မြေကျခဲ့ရပြီဖြစ်သလို တိုင်းပြည်လည်းနာလှပါပြီ။ အာဏာနဲ့ လက်နက်ရှိသူ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကြင်နာစာနာမှုတွေပေါ်လာမယ့်နေ့ကို အင်အားမဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေက စောင့်စားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ -Unicode ~~~~~ ဗိုင္းရပ္စ္ကာလ အပစ္ရပ္ဖို႔ နိုင္ငံတကာတိုက္တြန္းမွု ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ေတြ ဥပကၡာျပဳ ~~~~~~ (ခင္ေမာင္စိုး) ■ ျမန္မာျပည္တြင္းတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးမွု တေန႔တျခား တိုးပြားလာေန ပါတယ္။ အဲဒီစစ္ေျပးဒ